Ekuphekeni, kukho ezininzi iresiphi yenkukhu, ethetha malunga nendlela yokufumana inkukhu enkukhu. Enye yezona zithandwa kakhulu phakathi kwazo kukupheka kweenkukhu ezibiweyo. Le recipe ayifuni ixesha elininzi kunye namandla, kodwa ukupheka inkukhu ngale ndlela, ngokuqinisekileyo awuyi kufumana isidlo esiphucukileyo kuphela, kodwa kufuneke ukuba unqwenela ukukhwela.
Zonke izitya ezivela kwinkukhu sele zithandwa kuba inyama yenkukhu iyimveliso efikelelekayo kwaye engabizi kakhulu ekulungiselelwe ngokukhawuleza. Ngokuqinisekileyo, ngamnye umfazi ufuna ukupheka ngendlela yakhe isidlo esithakazelisayo nesinomdla kwaye uhlala efumana inkukhu, ekhonza njengomhlobiso obalaseleyo. Ngoko, ukuba ufumane le miphumo, kufuneka: i-oli yemifino, inkukhu, iziqholo, i-lemon, i-seasonings ekulungele, i-oven microwave, i-aerogrill, ibhokisi lomlilo.
I-oven microwave kunye nokukhutshwa kwenkukhu
Fumana isikhotho esithandekayo ungabhaka inkukhu kwivenkile ye-microwave. Ukwenza oku, khetha inkonyana encinane, malunga neekhilogram ezi-1.3. Siyabulela lo bunzima, inkukhu yethu ingabhaka kakuhle. Marinuem kwiinyoni ezifunekayo ze-marinade kwaye ushiye ixesha elithile, ngoko sibeka inkukhu kwi-grill yokugcoba. Ngaphantsi kwesi sikwere, kufuneka ubeke ipuleti, eyokupheka ngexesha lokupheka. Umsebenzi wakho oyintloko kukuba ufanele uqiniseke ukuba le foil ayifuni kwixesha lokupheka. Izinga lamandla kufuneka libekwe kwi-100%. Ngaphantsi kweli gunya ukuba inkukhu iya kupheka kuphela ngoncedo lwe-microwaves. Ixesha elifanelekileyo lokupheka liyimitha eli-10. Emva kokuba sisuse i-foil, kwaye uthele amanzi kwi-plate. Shintsha i-oven microwave kwi-grill + i-microwave uze upheke imizuzu eyi-12. Ngoku sijika inkukhu yethu kwaye upheke umlinganiselo ofanayo ngaphesheya. Ngenxa yoko, unokufumana i-crust crust.
Ukupheka inkukhu kwi-aerogril
Kwimeko yokupheka inkukhu kwi-aerogrill, unokukhetha inyoni enkulu yobukhulu. Ngaphambi kokuhamba ngeenkukhu, yifake kwi-pallet okanye i-grate. Urhulumente lunokuxhomekeka kuhlobo lwe-aerogrill. Sibeka ubushushu kwii-160 degrees. Ixesha lokupheka kufuneka libe nemizuzu engama-45. Ukuba ugcoba inkukhu kwi-grate, akudingekile ukuyijika rhoqo. Ewe, ukuba uthe wagqiba ukusebenzisa i-pallet kwinkqubo yokulungiselela, okokuqala kufuneka ugobe inxalenye engezantsi kwemizuzu eyi-15 kwaye emva koko kuguqule inkukhu. Musa ukulibala ukujonga ilanga lokulungela.
Ukuba upheka inkukhu kwi-spit ekhethekileyo-vula i-grill imizuzu eyi-10 ngaphambi kokupheka imizuzu eyi-10 ngaphambi kokuba uyijike. Ngoku sibeka inkukhu kwi-grill, kodwa ngaphambi kokuba siphume amaphiko kunye nenxalenye engaphantsi yemilenze ene-foil. Siyilungisa ngenkukhu inkukhu ngendlela enokuthi i-carcass ayikwazi ukuzulazula ngokuzenzekelayo kwi-spit phantsi kobunzima bayo. Kwimeko embi, inokutshisa ukusuka kwelinye icala. Umphezulu wenkukhu ugcotshwe ngeoli yeoli kunye nokubeka isikhephe kwisithuba esikhethekileyo. Vula i-grill, ubeke ubushushu ukuya kuma-degrees ama-200. Sipheka le ntaka imizuzu engama-30. Ngokuqinisekileyo uya kufumana ukukhwela okufunwayo.
Ukupheka inkukhu ehovini
Ukubhaka inkukhu ehovini ingaba nayiphi na ubukhulu. Kwinkqubo yokubhaka, ungasebenzisa i-pallet, i-grate okanye i-jar evamile, apho kuyimfuneko ukuba "ityala" intaka. Ngaphambi kokupheka, thabatha inkukhu uze uyibeke ehovini eshushu. Ubushushu bokubhaka kufuneka bube ngama-180 degrees. Ixesha lokupheka elipheleleyo kufuneka lixhomekeke kubukhulu benkukhu ngokwayo. Xa ulungiselela inkukhu, ungalibali ukuyijika kangangeexesha ukwenzela ukuba ibhakabhile kangangoko kunokwenzeka. Ngoko sine-crust crust.
Ukuze ufumane ukukhupha okukufunayo kwinkukhu, ungayiphumuli, mhlawumbi iya kuba yome kakhulu. Hlola ukuzimisela kwenkukhu kunokuyihlaba kwindawo yesifuba okanye intamo, usebenzisa isalathisi somsi. Ukuba ngaloo mzuzu ukukhanya okulula, okubonakalayo okungekho igazi kuphuma kwi inkukhu - kulungele ngokupheleleyo.
Indlela yokuhlamba iimpahla ngokuchanekileyo
Imigaqo eyisiseko yokukhonza iwayini elincinane kwitafile yokutya
Indlela yokuphila ukuze ubomi buwanele?
Jam kusuka kwi-zucchini kunye neinanapple, ii-apula, i-lemon kunye ne-orange-i-step-by-step-recipes nemifanekiso
Yintoni e mtsalane nendoda kwabesetyhini
Ukupheka kwezitya kunye neetamatato
Iingxaki zesondo eziphambili nezisombululo zabo
Ukuvuvukala komlenze ngexesha lokukhulelwa
Imiva ngaphambi kokubeleka ngexesha lokukhulelwa
Zonke zilahlekile: uAlyona Vodonaeva ulaka!
Indlela yokwenza umntwana amthande?
IHoroscope yeCancer-Woman ngo-Apreli 2017
Qinisekisa imbangela yesimo esingathandekiyo somzimba
I-Toxicosis - uphawu lokukhulelwa